सोमपालको टिम विन्नीपेग ग्लोबल टी-२० को फाइनलमा
२o७६ भदौ ७ शनिबार / Saturday, August 24, 2019
२o७६ श्रावण २६ आइतबार
काठमाडौँ । क्यानडामा जारी ग्लोबल टी-२० लिग अन्तर्गत विन्नीपेग हवक्स फाइनलमा पुगेको छ ।
गएराती सम्पन्न खेलमा विन्निपेगले ब्रम्पटन वोल्भ्सलाई ७ विकेटले पराजित गर्दै फाइनलमा पुगेको हो ।
ब्रम्पटनले दिएको २०१ रनको लक्ष्य पछाएको विन्नीपेगले २० ओभरमा ३ विकेट गुमाउदै लक्ष्य पुरा गरेको थियो ।
विन्नीपेगका लागि शैमान अनवरले २३ बलमा सर्वाधिक ५२ रन बनाएका थिए भने जीपी डुमिनीले ३४ बलमा अविजित ५० रन बनाएका थिए । त्यस्तै सन्नी सोहलले ४१ तथा क्रिस लिनले ३५ रन बनाएका थिए । त्यस्तै डवाने स्मिथले ११ बलमा अविजित १७ रन बनाएका थिए ।
यस अघि टस जितेर पहिला ब्याटिंग गरेको ब्रम्पटनले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाउदै २०० रन बनाएको थियो ।
ब्रम्पटनका लागि डारेन सामीले सर्वाधिक ३३ रन बनाए भने बबर ह्यात र शहिद अफ्रिदीले ३२-३२ रन बनाए भने वहाव रियाजले २३, जर्ज मुनसीले २२, रोहन मुस्तफाले १४ रन बनाएका थिए ।
विन्नीपेगका बलर रायद एमरीटले ३ विकेट लिए भने कालीम सानाले २ विकेट लिएका थिए ।
नेपाली बलर सोमपाल कामीले यस खेलमा प्लेइङ इलेभेनमा परेनन् । पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय फ़्रेन्चाइजी टी-२० लिग खेलिरहेका सोमपालले यस अघि केवल एक खेल खेलेका छन् ।
यस खेलमा नखेलेपनि सोमपालले सबस्टिच्युट फिल्डरको रुपमा मैदानमा आएर पाकिस्तानी आक्रामक ब्याट्सम्यान शहिद अफ्रिदीको क्याच लिएका थिए ।
अब यस बर्षको ग्लोबल टी-२० लिगको फाइनल खेल आजराती भान्कोवर नाइट्स र विन्नीपेग ह्वक्सबीच हुने भएको छ ।
सोमपालको टिम विन्नीपेगले जित्यो ग्लोबल टी-२० को उपाधि
काठमाडौँ । क्यानाडामा भएको ग्लोबल टी-२० को उपाधि विन्नीपेग ह्वक्सले जितेको छ । आइतबार बिहान सम्पन्न खेलमा विन्निपेगले भान्कोवर नाइटलाई सुपरओभरमा पराजित गर्दै ग्लोबल टी-२० लिगको उपाधि जितेको हो । विन्नी
काठमाडौँ । क्यानडामा जारी ग्लोबल टी-२० लिग अन्तर्गत विन्नीपेग हवक्स फाइनलमा पुगेको छ । गएराती सम्पन्न खेलमा विन्निपेगले ब्रम्पटन वोल्भ्सलाई ७ विकेटले पराजित गर्दै फाइनलमा पुगेको हो । ब्रम्पटनले दिएको २०१ रनको
सन्दीपको टोरन्टो बाहिरियो, विन्निपेग इलिमिनेटरमा
काठमाडौँ । क्यानाडामा जारी ग्लोबल टी-२० लिगमा विन्निपेग ह्वक्स इलिमिनेटरमा पुगेको छ । शुक्रबार बिहान सम्पन्न खेलमा विन्निपेगले दक् वर्थ लुइस नियमका आधारमा टोरोन्टोलाई २ रनले पराजित गर्दै प्रतियोगिताको इलिमिनेटरमा पुगेको
ग्लोबल टी-२० मा म्याच फिक्सिङको आरोप !
काठमाडौँ । क्यानडामा जारी ग्लोबल टी-२० मा म्याच फिक्सीङको आरोप लागेको छ । हाल ग्लोबल टी-२० लिगमा विन्नीपेग ह्वक्सबाट खेलिरहेका पाकिस्तानका खेलाडी उमर अकमलले पुर्व टेस्ट खेलाडी मन्सूर अख्तरले खेल फिक्स
घरेलु मैदानमा क्रिस्टल प्यालेससँग हार्यो म्यानचेस्टर युनाइटेड
सम्भवत: आइतबार प्रारम्भिक न्याय पाउने छु – रवि लामिछाने
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई युएईको को सर्वोच्च नागरिक सम्मान
अरिङ्गालको टोकाइबाट महिलाको मृत्यु
चेल्सीको जितमा युवा खेलाडी अब्राहीमको दुई गोल
वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन : दुताबासबाटै पुनःश्रम स्वीकृति
तेस्रो एशेजमा अस्ट्रेलिया बलियो, इङल्याण्डलाई ३५९ रनको लक्ष्य
काँग्रेस-कम्युनिस्ट चल्ने राप्रपा नचल्ने हुदैन- राजेन्द्र लिङ्देन
पहिरोमा श्रीमती र दुई छोरा गुमाएकालाई प्रदेश सरकारको छ लाख राहत
डिपो नहुँदा खाद्य संस्थानको चामल बिकेन
अस्ट्रेलियाको बलिङ अगाडी टिकेन इङल्याण्ड, ६७ रनमा अलआउट
पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा नाम जोडेर प्रचार गरिएकोमा रेनु दाहालको आपत्ति
जयशंकरलाई कसले भेटे, कसले भेटेनन् ?
म्याच फिक्सिङ प्रकरणमा श्रीशान्तलाई राहत, अर्को बर्षदेखि खेल्न सक्ने
घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृति खोल्ने समितिको निर्णय
गौरामा देउडाको ‘क्रेज’